Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Geetaachoo Raddaa -
Gabrummaa fi cunqursaa dabalatee rakkinaa fi gidiraa dhala namaa irra gahaa turee fi jiru hundaaf sababootaa fi maddeen gurguddoo tahan keessaa tokko ofittummaa dhala namaa kan daangaa hin qabnee dha. Osoo ofittummaa dhala namaa isa daangaa hin qabne kana dhabamsiisuun danda’amee, addunyaan dhala namaa hundumaaf iddoo jireenya jannataa fi qananii tahuu ni dandeessi. Waa’een kanaa hedduu bal’aa fi gadi fagoo, kan kitaabban hedduun irraa barreeffamuu danda’an waan taheef, isa hanganumatti dhaabee gara yaada ijoo barreeffama kiyyaatti dabruun filadha. Ummatni keenya (Oromoon) humna Habashootaa kan gargaarsa Warra Adii (Warra Baar-gamaa) argateen mohatamee gabrummaa jalatti kufuun seenaa gaddisiisaa tahu illee, seenaan gaddisiisaan akkasii baasa addaa kan Oromoo qofa mudate miti. Ummatootni Addunyaa kanaa irra hedduun isaanii jaarraa hedduudhaaf alagaadhaan gabroomfamanii akka turan seenaan ragaa baha waan taheef. Haa tahu malee yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa irraa kan hafe addunyaa bakkoota kaan hundatti waa’een gabrummaa/colony seenaa tahee dabree jira. (waa’ee gabrummaa harka wayyaa jalaan ykn. Indirect Colonial System yoo dubbanne malee jechuu dha.) Impaayerummaan Itoophiyaas qabsoo diddaa gabrummaa ummatoota gabroomfaman (keessattuu Oromoo) irraa isa mudateen akka maleetti madaawee jal-bultii dhabamuu/awwaalamuu isaa irra gahee akka jiru dhugaa dirreetti mul’atuu dha. Bilisummaa, Nagayaa fi Mirgoota Dimokiraasii Oromoo fi ummatoota Impaayera Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran hundumaa gonfachiisuuf guutummaatti dhabamsiifamuun sirna Impaayera Itoophiyaa fala tokkicha filmaata biraa hin qabnee dha. Waan taheef dhabamsiifamuun Impaayerummaa Itoophiyaa sabaa fi sab-lammoota achi keessa jiraataniif gammachuu guddaa fi abdii hegeree jireenya isaanii ti. Nam-tokkee fi murnoota dhukkuba ofittummaa dhala namaa kan daangaa hin qabne olitti jennu kanaan dhibamanii rakkataniif garuu, waa’een dhabamsiifamuu sirna Impaayerummaa kun hedduu rifaasisaa, yaaddessaa fi gaddisiisaa qofa osoo hin taane akka waan Jireenyi Addunyaa kanaa dhumachuuf deemuutti fakkaatee itti mul’ata. Waan taheef waa’ee qabsoo bilisummaa Sabootaa (keessattuu waa’ee QBO fi Oromummaa) arguu fi dhagahuun eebicha daran itti hadhaawa. Akeekni barreeffama gabaabduu tanaa nam-tokkeewwan akkasii keessaa tokkoo lama maqaa dhawuudhaan eenyummaa isaanii namuu hubatee sochii fi gochaa diigaa isaanii akka jala bu’ee hordofu akeekuu dha. Namootni barreeffamoota dhimma QBO ilaalchisuun marsaalee interneetii adda addaa irratti mamaxxanfaman hordoftanii dubbistan akkuma quba qabdan, dhihoo kana namni maqaan isaa Dr. ‘Fiqiree’/Fiqiruu Tolossa jedhamu dhimma ODF wajjin wal qabsiisee Dr.Bayaan Asoobaatiif xalayaa tokko barreessuu isaa ni yaadattu. Barreeffama nama sanaa akkan dubbisee hubachuuf yaaletti qabiyyeen isii tan akkaataa itti of ajjeesan ODF gorsitu dha. “Akkan beekuttin of ajjeesa jette jaartiin haada miilatti dhawattee jalalii garbuutti of hiitee.” Isa jedhan tokko dhageessanii jirtuu laata? Baatiilee muraasa dura dhaabni maqaa ODF jedhuun ijaarame bu’uuressitoota isaa keessaa hangi xiqqoon tokko namootuma bu’uuressitoota ABO turan tahuu fi kaayyoo ABO duraan ittiin masakamaa turres dhiisnee/lagannee jirra jechuun isaanii yeroo dhagahame mooraan humnoota Habashaa kanneen Impaayerummaa Itoophiyaa tiksuuf carraaqanii gammachuudhaan guutame. Tarkaanfiin hoogganoota QBO duraanii keessaa gariin isaanii ODF dhaabuudhaan fudhatan kun hiikaan isaa haada mormatti dhawatanii of fannisuu/ajjeesuu dha jedhanii waan hubataniif gammadan. Maaltu itti aana? (maaliin gadi bahan?) jedhanii oggaa hordofan garuu, jarri maqaa dhaabaa haaraa baafachuu malee Qubee, Alaabaa, Oromiyaa, Jecha Itoophiyaan Impaayera jedhu……kkf. amma iyyuu gadi hin lakkisne jechuu hubatan. Yeroo kana isaan keessaa tokko (‘Fiqiree’/Fiqiruu Tolossa) aaree “Duuba of ajjeesuun yoom akkanatti taate? Kuni hoo mammaksuma jaartii isa “Akkan beekuttin of ajjeesa.” Jedhu sana fakkaattee.” Jedhee lafaa ka’e. “…..Waan akka Qubee, Alaabaa, Oromiyaa….fi kkf sun gaarii mitii sana sana of irraa dhiisaa, of ajjeesuun akkasitti dafee dhugooma waan taheef…” jedhee Dr.Bayaaniif (maqaa kiristinnaa Bayyanaa Suubaa jedhu waliin) barreessee ergeef. “Daandii hantuutni baaste irra bofti mana namatti seena.” moo maal? Akka jedhamu (Mammaaksa kana dagadheeraa yoon dogoggore warri beektan na qajeelchaa) xalayaan Dr.Fiqiruu kan akkaataa of ajjeechaa ODF gorsu kun, hundeeffamuu ODF sababsatee Dr.Bayaaniin riqicha godhatee haa dhufu malee, kan inni ajjeesuuf irratti xiyyeeffatu Oromummaa fi QBO tahuun isaa sab-boontota Oromoo jalaa waan dhokachuu danda’u waan hin taaneef sab-boontota ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiran irraa dheekkamsaan qolatame. Yaadota bifa kanaan sab-boontota Oromoo irraa darbataman keessaa tokko kan namni maqaa isaa Y.Jamaal (B.B) jedhamu Amaarinyaadhaan barreessee dha. Xalayaan Y.Jamaal (B.B) kun ammoo namoota Habashaa kan Dr.Fiqiruu Tolossa waliin ejjennoo fi ilaalchaan wal fakkaatan hedduu aarsitee jibbaa fi hammeenya garaadhaa nuuf qaban akka bulgaafataniif gumaachite. Kanneen akkanatti jibbaa fi hammeenya garaadhaa nuuf (Oromoof) qaban bulgaafatan keessaa tokko nama Geetaachoo Raddaa jedhamu dha.
Tags habashoota Malkaa Caffee
Previous Haasawa walgahii Yaadannoo Jaarraa Abbaa Gadaa tan Altanta, USA irraatti dhihaate Jawaar Muhammad
Next Gaaddisni Oromoo Nederlaand Yaadannoo Sooreessaa J/Jaarraa Abbaa Gadaa Gad-geeyse